वीपी सङ्कीर्ण, पुष्पलाल परिपक्व र उदात्त — Imandarmedia.com
नेपालमा हरेक वर्षको साउनको पहिलो हप्ता वीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको चर्चा–परिचर्चा हुँदै आएको छ । समकालीन विश्व राजनीतिमा समाजवादी शिविर र पुँजीवादी शिविर गरी दुई शिविर अस्तित्वशील छन् । नेपाली राजनीतिमा पनि कुरा उही हो हो । नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक कडीलाई जोडेर हेर्दा पुँजीवादी शिविरको राजनीतिक सम्बन्ध रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसका संस्थापक नेता वीपी कोेइरालासित अन्तर्सम्बन्धित छ भने सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट अर्थात् समाजवादी शिविरको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका संस्थापक महासचिवका रूपमा पुष्पलाल श्रेष्ठसित सम्बन्धित छन् ।
नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक कडीलाई वर्तमानमा ल्याउँदा पुँजीवादी शिविरको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहनुभएको छ भने समाजवादी शिविरको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले गरिरहनुभएको छ । नेपालका अन्य राजनीतिक दल सापेक्षित रूपमा यी दुई शक्तिवरिपरिका रुझान मात्र हुन् ।
जनयुद्धमा माओवादीले आधार इलाका निर्माण गरे जस्तै ओखलढुङ्गालाई वीपी कोइरालाले सङ्घर्षको आधार इलाका बनाउनुभएको थियो । वीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मकथामा लेख्नुभएको छ, “मभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतकहाँ जान्थे तर मैले राजदूतलाई सिंहदरबारमा बोलाएँ ।” यसमा उहाँको कूटनीतिक भूमिका रहेको मान्न सकिन्छ ।
कतिपय सवालमा वीपीको राजनीतिक–कूटनीतिक सफलता पनि मानिएको छ । राजनीतिक ढाँचाबारे वीपी भन्नुहुन्थ्यो, “हामीले सोचेको ढाँचा राजालाई संवैधानिक प्रमुख राख्ने ढाँचा थियो । त्यो संसदीय प्रजातन्त्रको ढाँचा हुने थियो । त्यसमा बहुदलीय प्रणाली, बहुलवादी समाज र कानुनको राज्य हुने थियो । हामीले उदारवादी प्रजातन्त्रको अवधारणा राखेका थियौँ”, (वीपीका प्रकाशित अन्तर्वार्ता) । कतिपय सवालमा वीपीको धारणा अमेरिकी पक्षधरताबाट प्रेरित रहेको पनि देखिन्छ । यसलाई कतिपयले वीपीको कम्युनिस्टविरोधी धारणाको प्रकटीकरणको रूपमा पनि लिने गरेका छन् ।
नेपालको इतिहासमा एक समय नेपाली काङ्ग्रेस परम्परागत सत्तालाई पल्टाउन बल प्रयोग आवश्यक पर्ने कुरामा विश्वास गर्दथ्यो । उसले पूर्णसिंह खवासको नेतृत्वमा मुक्ति सेनाको गठन, बाबुकृष्ण शर्माको पहलमा आजाद हिन्द सेना निर्माण गरेको थियो । वीपी कोइरालाले पूर्वी कमान्डको राजनीतिक कमिसारियट गर्नुभएको थियो । उद्यपि वीपी कोइरालामा कम्युनिस्टविरुद्ध उग्र–चिन्तन रहेको देखिन्छ ।
यो उहाँको राजनीतिक सङ्कीर्णताको उपज थियो । वीपी कोइरालाको सङ्कीर्णता र अदूरदर्शी यतिसम्म थियो कि उहाँले यहुदी जातिवादी राष्ट्र इजरायललाई समर्थन गर्नुभएको थियो । वीपी कोइराला र उहाँको विचारधारात्मक परिस्थितिबारे नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरी भन्नुहुन्छ, “यहाँ विदेशी तत्वहरू छन्, कम्युनिस्टहरू विदेशी तत्वका आधारमा खेलिरहेका छन् । मेरो विचारमा त्यो (वीपीको) स्वस्थ विश्लेषण थिएन । त्यसले अहिलेसम्म अस्वस्थता दिएको छ । काङ्ग्रेस–म्युनिस्ट झगडा त्यसले झन् चर्कायो । पछि गणेशमानले मत्थर पार्नुभयो । त्यसको कटु अहिले पनि बाँकी छ । वीपीले अतिशयोक्ति नै गर्नुभएको छ । इन्डोनेसियामा ऐदितले गरेजस्तै कम्युनिस्टहरू यहाँ प्रवेश गरे भन्नुभएको छ ।
त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । ऐदित इन्डोनेसियाका समर्पित कम्युनिस्ट नेता थिए । उनको जीवनी आफैँमा प्रेरक छ । उहाँलाई (वीपी) कसले भन्यो वा हेर्नुभयो पङ्क्तिकारलाई थाहा छैन । यसलाई हामी राजनीतिक वक्तत्व भन्न सक्छौँ तर राजनीतिक मात्र होइन, एक प्रकारको गैर–जिम्मेवार वक्तत्व पनि भन्न सक्छौँ । यसले मुलुकलाई हामी हानी पु¥याएको छ” (कान्तिपुर दैनिक, ३ साउन, २०७१) ।
वीपी कोइरालाको मूल्याङ्कन गर्दै माक्र्सवादी सौन्दर्यशास्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ ले एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तरवार्ता दिनेक्रममा भन्नुभएको छ, “वीपीमा राजनीतिक कट्टरता थियो । लोकतन्त्रका लागि लडिरहनुभयो तर लोकतन्त्रमा कम्युनिस्टको अस्तित्व स्वीकार्न हिच्किचाउनुभयो । … वीपीले जान्नुभएन । निरङ्कुशताविरुद्ध मिलेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला एक्लै हिँड्न उद्यत हुनुभयो । राजा वीरेन्द्रसँग मेलमिलाप गर्न खोज्नुभयो । त्यस्तो मेलमिलाप कम्युनिस्टविरुद्ध परिलक्षित थियो ।
… तानाशाहीविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन भन्ने भावना वीपीमा देखिन्थ्यो । सैन्यफाँटमा दिनुपर्ने जति ध्यान दिन नसकेकामा पछिसम्म उहाँमा पश्चात्तापको भावना देखिन्थ्यो । … उहाँमा सुझबुझको कमी हुँदा मुलुकको राजनीति अझै पछाडि धकेलियो । बरु राजनीतिक बुझाइमा पुष्पलालजी नै अगाडि गएको देखियो । … २०१५ सालको आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको दुईतिहाइ सिट आउँदा कम्युनिस्टको चार सिट मात्रै देखेर सुरु–सुरुमा वीपीमा घमण्ड जागेको हुनुपर्छ । पञ्चायतकालमा कम्युनिस्टको राजनीतिक शक्ति बढेको देखेर पछिल्ला वर्षमा तर्सिनुभएको देखिन्छ ।”
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले “कम्युनिस्ट–काङ्ग्रेस मिलेर सङ्घर्ष गरौँ” भन्दा वीपीले पटक–पटक अस्वीकार गरिदिनुभएको थियो । २०४५÷०४६ को जनआन्दोलन र २०६३÷०६३ को जनयुद्धको जगमा उठेको १९ दिने जनआन्दोलनको सफलता पुष्पलालको सोही संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणाको प्रतिफल थियो । यसबाट देखिन्छ कि वीपी कोइराला अदूरदर्शी र राजनीतिक सुझबुझको अभाव भएको नेता हुनुहुन्थ्यो । वीपी कोइरालामा कम्युनिस्ट खतराको ह्याङ धेरैपछिसम्म पनि रहेको देखिन्छ । सायद, यही कारण पुष्पलालले यस्तो लेख्नुभएको थियो, “संसदीय व्यवस्थाको सुरक्षाका लागि समस्त जनवादी शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ भनी अपिल गरिएमा त्यसतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा काङ्ग्रेसका नेताहरूले उल्टै ‘कम्युनिस्ट खतरा’ को रूपमा हौवा उठाउन थाले”, (श्रेष्ठ, पुष्पलाल, नेपाली जनआन्दोलनको एक समीक्षा) ।
वीपी कोइराला कम्युनिस्टसँग नमिल्नुको कारण के थियो ? नेपाली राजनीतिमा यसबारे विभिन्न अड्कल काटिएको पाइन्छ । यसबारे प्रकाश कोइराला भन्नुहुन्छ, “वीपी कोइरालालाई इतिहासको बोध थियो । ७० वर्ष पहिले चीनमा एक मात्र प्रजातान्त्रिक नेता थिए, च्याङ काइसेक । माओ र लीली सानको पनि खासै प्रभाव थिएन । त्यसबेला अमेरिका जापानसँग युद्धमा थियो । अमेरिकाले जापानलाई हराउनुपरेको थियो । उसले च्याङ काइसेकलाई दबाब दिँदै भन्यो, ‘तिमीहरू प्रजातान्त्रिक शक्तिले मात्र हुँदैन, गुरिल्ला वामपन्थीसँग छन्, तिनीहरूसँग मिल ।’ अनि च्याङ काइसेकले लीली सानसँग हात लिए । जापान त हा¥यो तर प्रजातान्त्रिक शक्तिभन्दा शक्तिशाली भएर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र माओको उदय भयो । अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थमा च्याङ काइसेक नफसेको भए चीनमा कम्युनिजम आउँदैनथ्यो । त्यो कुरा वीपीले बुझ्नुभएकाले उहाँले कम्युनिस्टसँग सहकार्य नगर्नुभएको हो ।”
नेपालका बहुसङ्ख्यक जनता कम्युनिस्ट सिद्धान्त, विचार र आदर्शमा विश्वास गर्दछन् । त्याग, तपस्या, बलिदान र वीरताको कोणबाट भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दा नेपालका कम्युनिस्टहरूले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको लडाइँमा कैयौँगुणा बढी योगदान गरेका छन् । नेपालका कम्युनिस्टहरूमा पनि माओवादीको योगदान झनै विशिष्ट रहेको छ । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई वर्तमानमा प्रचण्ड–बाबुरामले नजरअन्दाज गर्नु बेग्लै कुरा हो । तर पनि नेपाली जनयुद्धको महान् भावलाई आत्मसात् गर्दै यतिबेला नेपालमा एकीकृत जनक्रान्ति भइरहेको छ । यसलाई रोक्ने क्षमता न त काङ्ग्रेसीजनसित छ, न त प्रचण्ड–ओलीहरूसितै नै रहेको छ । नेपाल कम्युनिस्टमाथि लगाइएको राजनीतिक प्रतिबन्ध त उनीहरूको ‘हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ’ सिवाय अरू केही पनि होइन ।
आत्मलघुताबोधका गम्भीर सिकार हुनुभएका वीपी कोइरालाको तुलनामा पुष्पलाल धेरै माथिका राजनीतिशास्त्री र चिन्तक हुनुहुन्थ्यो । वीपी कोइरालाको समाजवाद भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको अन्धनक्कल थियो । नेपाली जनताको साथ र समर्थनमा माओवादीद्वारा सञ्चालित महान् जनयुद्धमा जनसंहार गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र तिनका नेताहरू अहिले पनि ठमठमी हिँडिरहेका छन् । महान् जनयुद्धका क्रममा ते¥ह हजारभन्दा बढीको हत्या र पाँच हजारभन्दा बढीको बेपत्ता पार्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूद्वारा नै भएको थियो ।
अध्ययन र विश्लेषणहरूबाट हामी यो निष्कर्षमा पुग्छौँ कि वीपी सङ्कीर्ण राजनीतिकर्मी हुनुहुन्थ्यो भने पुष्पलाल परिपक्व र उदात्त राजनीतिकर्मी हुनुहन्थ्यो । नेपालमा कम्युनिस्टविरोधी विरासत र तिनको वर्गीय चिन्तनधाराको उपजको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध आएको छ । आज नेपाली राजनीतिक सत्तामा ओली–प्रचण्ड रहे पनि मूलतः यो नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ संस्करण मात्र हो । ओली स्वयम्ले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा एक अन्तर्वार्ता दिँदै ‘आफू र आफ्नो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नभएको’ स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । यतिबेला काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सैन्य रणनीति एमसीसी पास गर्न ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन् । यसबाट आजको काङ्ग्रेसको हविगत बुझ्न कुनै समस्या हुनुहुँदैन । ओलीको निगाहमा आफ्नो राजनीति बचाएका प्रचण्डहरूको पनि अब के कुरा गर्नू र ! दक्षिणपन्थको पनि दक्षिणपन्थ दलदलमा नाकैसम्म डुबिसकेका बाबुरामको कुरा गर्नु पनि समय खेर फाल्नु मात्र हो । ओलीका लागि छाती चिर्ने एकाध हनुमानहरूको झन् के कुरा गर्नू